'Haasaan Ministirichi paarlaamaatti taasisan kan warra gaafate qaanesseedha' - BBC News Afaan Oromoo
Haasaan kaleessa ministirri mummee Itoophiyaa paarlaamaa biyyattiif yeroo lammaffaaf taasisan kan hedduu uumata bal'aa gammachise qofa osoo hintaane kan warra gaaffii dhiyyeessan illeen qaaneesse ture jedhu jiraattoonni magaalaa Naqamte BBC'n dubbise.
Ministirri Mummee Itoophiyaa Dr Abiyi Ahimad Wiixata taree gaaffiiwwan miseensoota mana maree bakka bu'oota ummataatiin ka'aniif deeebii kennaniiru. Haasaa deeebii taasisanii irratti yaadniwwan garaagaraa kannamaa oleera.
Riipportarri keenyas dhimma kanarratti jiraattoota magaalaa Naqamtee dubbisseen, haasawichi kan ummata gammachisee qofa osoo hintaane kan warra gaafficha dhiyeessan afaan qabachise ture jedhaniiru.
Abidii Ittafaa Ayaanaa jiraataa magaalaa Naqamtee yoo ta'an, deebii Ministirichi gaaffii miseensoota paarlaamaatiin ka'eef kannaniin baayyeen dinqiisiifadha jedhaniiru. itti dabaluunis dhaabba isaanii yoo deegaruu baadheyyu, beekumsa fi kennaa Dr Abiyi garuu nan dinqisiifadha jedhaniiru.
Sababii attamiin akka haasaan Dr Abiy akka qalbii isaanii harkisee yoo himaniis, ''hawaasni bara dheeraaf waan Dr Abiyi dubbatan kan gaafachaa ture. Kanaafu, akkan dhokatanii malee namoonni akkasii baayyeetu jiraa jedhee yaadu nataasiseera haasaan Mummee kun,'' jedhaniiru.
Jiraattun magaalaa kanaa kan biraa Moneeti Badhaasaa gama isheetiin, hunda caalaa jechi mootummaatuu shororkeessaadha jedhutu qalbii kiyya harkisee jetteeti.
Akka Moneeti himtuutti, Oromoon waggoottan 27n darbaniif sirbama miraa kana hinjedhamne keessa darbuun hedduunis lubbuusaanii wareeganiiru. Ammas taanaane wantoonni gutuummaatti hinhiikamneef ni jiru. Haa ta'u malee ministirri mummichaa dhugaa jiru waan dubbataniif baayyee natti tolee jira jetterti.
Akkasumas waljalaan dhimmoonn hiikaman jiraatu malee waan ta'eef, ammaaf jechi shororkeessa jedhu sun eenyuun akka ilaalatu himusaanitti gammadeera jetti.
Haaluma walfakkaatuunis, Obbo Amaanu'el Bantii haasaan ministirri mummee taasisan kan ummata hunda kakaaseedha jedhaniiru. ''Deebiin isaanii ummatatti tolu qofa osoo hintaane warruma gaaffiicha dhiyyeesse illeen kan hafaan qabachisee ture'' jedhaniiru.
''Kaayyoon teele lakkoofsa fayyadamtoota mobaayilii guddisu qofa miti'' jedhaniiru Dr Abiy Ahimad